2011-10-02 ~ Myanmar Express
ချက်ချင်းဝဋ်လည်သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ (Britain which hasaretribution immediately) (ပေးစာ - ၃၃)
၁။ မကြာသေးမီက ကမ်္ဘာတစ်ဝန်း ဒီမိုကရေစီဘိုးအေဟု အမည်ပေးခံထားရသည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ လန်ဒန် မြို့တော်မြောက်ပိုင်း၌ အဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အကြီးအကျယ်တအံ့တသြဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိ မာ့ခ်ဒက်ဂန်ဆိုသူကို လန်ဒန်ရဲက သေနတ်နှင့်ပစ်ခတ်ရာက စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွင် ရဲက ပြည်သူကို သေနတ်နှင့်ပစ်ခတ်သည်ဟူသည့်အချက်သည် မအံ့သြဘဲမနေနိုင်လောက်သည့် အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းင်းအချက်ကိုအခြေတည်၍ အဓိကရုဏ်းများစတင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားရသည့် အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကြီးထွားမှု၊ ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ ဘာမင်ဂန်၊ လစ်ဗာပူးလ်၊ နော်တင်ဟမ်၊ ဘရစ်စတန်နှင့် မစ်ဒ်ဝေးဒေသတို့တွင် လုယက်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု နှင့် မီးရှို့မှုများ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အဓိကရုဏ်းစတင်ချိန်မှစ၍ လူပေါင်း ၅၂၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ(၉)ရက်နေ့ ညတွင် ရဲက ဆန်္ဒပြသမားများကို နံပါတ်တုတ်များဖြင့် ရိုက်နှက်နှိမ်နင်းခဲ့ပါသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့၏အဆိုပါလုပ်ရပ်များအပေါ် ဘီဘီစီလေသံဖြင့်ပြောရလျှင် ““အဆိုပါဖမ်းဆီးမှု၊ ပစ်ခတ်ရိုက်နှက်မှုတွေ အပေါ် နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရပါတယ်””လို့ပြောရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူပင် ဘီဘီစီလေသံအတိုင်း ““အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးပါ””ဟု မေတ္တာရပ်ခံရမည့်အနေအထားရှိ ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အဓိကရုဏ်းမျိုး ဗြိတိန်တွင် ၁၉၈၅ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တို့တွင်လည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပါသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဘရစ်စတန်အဓိကရုဏ်း၌ လန်ဒန်မြို့နေရာအနှံ့တွင် မီးလောင်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရပါသည်။ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူများကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးမှ ရဲများက ရိုက်နှပ်ဖမ်းဆီးစဉ်၃။ လန်ဒန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဓိကရုဏ်း၏ အကြောင်းအရင်းမှာ ““ဒက်ဂန်””အားရဲတပ်ဖွဲ့မှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှု၊ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကြီးထွားလာမှုနှင့် လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်များဖြတ်တောက်မှု၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟချက်ကြီးမားလာမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် လူမှုရေးဆောင်ရွက်ပေးမှု နိမ့်ကျနေမှု၊ ရာဇ၀တ်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပွား လာမှု၊ အဓိကရုဏ်းများဖန်တီးလုပ်ဆောင်မှု၊ ဘာမင်ဂန်ရှိဆူပူဆန်္ဒပြမှုများသည် ဒေါသကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အလိုရမက်လောဘဇောကြောင့် လုယက်ယူငင်လိုသော စရိုက်လက္ခဏာများရှိမှု စသည့်အချက်များပါဝင်ကြောင်း သတင်းဌာနများက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ၄။ ဆန်္ဒပြသမားများသည် ရဲကားများ၊ ဘတ်စ်ကားများကိုလည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ တော့ပ်တင်ဟမ်ဒေသရှိ ဈေးဆိုင်များ၊ နေအိမ်များနှင့် စတိုးဆိုင်တံခါးများကို ဖျက်ပြီးလုယက်ခဲ့ကြပါသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၁၁ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဥပဒေမဲ့ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မီးငြိမ်းရန်အလွန်ခက်ခဲ ခဲ့ပါသည်။ ၅။ ၀န်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်းက သြဂုတ်လ(၁၀)ရက်နေ့တွင် လန်ဒန်မြို့၌ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ၁၆,၀၀၀ အထိချထားခဲ့၍ အဓိကရုဏ်းမဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည့် မန်ချက်စတာမြို့တော်တွင် လုယက်မှုနှင့် မီးရှို့မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရပါသည်။ သေဆုံးသူဦးရေ ၃၀ ခန့်မြင့်တက်လာကြောင်း ဗြိတိသျှအစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ၆။ အဓိကရုဏ်းနှင့်ပတ်သက်၍ အီရန်သမ်္မတ မာမွတ်အာမက်ဒီနီဂျက်က ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီး အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကုလသမဂ်္ဂအဖွဲ့ထံ တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ဗြိတိသျှရဲတပ်ဖွဲ့က ပြည်သူများကို ယခုကဲ့သို့ ကြမ်းတမ်းစွာနှိမ်နင်းခြင်းသည် လက်ခံဖွယ်မရှိကြောင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့သည် ရေနံကိုရလိုမှုဖြင့့်် အီရတ်၊ အာဖဂန် နစ်္စတန်၊ လစ်ဗျားနိုင်ငံတို့အားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မည့်အစား ပြည်သူများ၏ တောင်းဆိုချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်းနှင့် အီရန်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့် ကြောင်း အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ၇။ ဆူပူအကြမ်းဖက်သူများသည် jewelling shops နှင့် Wood Green, London တို့ရှိ လက်ဝတ်ရတနာ ဆိုင်များသို့ ၀င်ရောက်လုယက်ယူငင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုလည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံကြီးသားများသည်လည်း အလျှိုအချောင်လုပ်တတ်သည့်စရိုက်ကြီးမားသည်ကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါသည်။နိုင်ငံကြီးသားများက ခိုးယူ လုယက်ကြစဉ်၈။ ၎င်းင်းဆူပူလုယက်မှုသတင်းများကို သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အရဆုံးဖြစ်သည့် ဘီဘီစီက မည်သို့လျော့လျော့ ပေါ့ပေါ့ထုတ်လွှင့်နေသည်ဆိုသည်ကို တွက်ဆကြည့်ရန်လိုပါသည်။ သတင်းလွတ်လပ်ပါသည်ဆိုသည့် ဘီဘီစီသည် ““ တော်ဝင်မိသားစု””သတင်းကို ခွင့်ပြုချက်ရမှထုတ်လွှင့်ရသည်ဖြစ်ရာ ဤဆူပူလုယက်မှုသတင်းသည် တော်ဝင်မိသားစုသတင်းမျိုးနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးရနိုင်သည့် အနေအထားရှိပါသည်။ ဘီဘီသည်““ ကိုယ့်မျက်ချေး တော့ကိုယ်မြင်ဟန်”” မရှိပါ။ သူများအကြောင်းဆိုရင် ရေသောက်ပြီး အိမ်ပေါက်စေ့လှည့်လည်ပြောတတ်သည့်အမွှာ ညီနောင်အသံလွှင့်ဌာန များဖြစ်သည့် BBC, VOA, RFA နှင့် DVB တို့သည် တက်ညီလက်ညီရှိကြပါသည်။ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီး အိုင်ယာလန် ရောက်စဉ်က၉။ ဘီဘီစီအသံလွှင့်ဌာန၏ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကို ဗြိတိသျှအစိုးရကရွေးချယ်ပြီး ဘုရင်မကြီးက အတည်ပြု ခန့်ထားပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦးရှိပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တစ်ဦးခန့်အပ်ထားပါသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ဘီဘီစီစီမံခန့်ခွဲရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းင်းလက်အောက်တွင် အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကိုခန့်ထားပါသည်။ ဘီဘီစီ၏အသုံးစရိတ်ကို ဗြိတိသျှပါလီမန်က နှစ်စဉ်ခွင့်ပြု ပေးထားရာ ပင်လယ်ရပ်ခြားအသံလွှင့်အစီအစဉ်များအတွက် ပါလီမန်က နှစ်စဉ်စတာလင်ပေါင် ၁၅ သန်းခန့် ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ၎င်းအချက်များကြောင့် ဘီဘီစီသည် အစိုးရနှင့်မဆိုင်၊ သီးခြားအသံလွှင့်ဌာနဟု ကြေညာခြင်းသည် ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စားလုပ်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အလားတူပင် ဗြိတိန်အစိုးရသည် နိုင်ငံတကာ တွင် မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေရေး ၀င်ရောက်စွက်ဖက်လျက်ရှိခြင်းကြောင့် ယခုအဓိကရုဏ်းဖြစ်စဉ်သည် ချက်ချင်း ၀ဋ်လည်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အတိအကျမှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ဖော်လံဖား BBC ကိုချိုRecently, at the northern part of London city of Britain given the name “ the grandpa of democracy all over the world”, an occurrence of riot made astonishment all over the world. The London police shota29 year old man Mark Duggan and it started riot. It can't help wondering this point that the police shot the civilian in democractic nation like that. After depending on this point, the riots started to occur because of poverty gap and increasing problems of unemployment.In Birmingham, Liverpool, Nottingham and Bristol regions, robberies, violences and arsons occured terribly. 525 People were captured at that time and on the night of 9th August, the policemen vanquished by using bludgeons. By BBC pronouncing words (accent) on that incident of the police force, "These captures and violences make anxiety to international community. Similarly it was in the position to request that "release the captured prisoners by violence". Likewise, in 1985 and 1995, it had occured in Britain. In 1995, the arsons of Bristol, riots were being scattering in London.Gunshot to Duggan from police force, increasing the problem of unemployment, cut out of the measure of social welfare, large gap between richness and poorness, lowliness in social undertaking (performance)of developed nations, more occurance of the cirme, fabrication the riots and demonstration violence in Birmingham were not for anger. The Newsagencies proclaimed that it was for the characters of robery avarice.Protesters fought the police cars and buses. They destroyed the doors of the stores, the shops and the residences and robbed. 111 members of police force injured. During unlawful incident, members of Fire Brigade were very difficult to extinguish.On 10th August in London, Prime Minister David Cameroon deployed 16,000 security forces. So, the riot did not occur. But, in Manchester city, third largest town, robbery and arsons occured. British Government broadcastanews that the dead toll became raised about 30.Concening with the riot, Iran Presidant Mahmoud Ahmadinejad censured and claimed to the United Nations to take action seriously. On 10th August, Iran Foreign Ministry issued the news that not to accept the vanquishing to the civilians from British police force, like that the government should undertake in full the claim of the civilians in stead of invation to Iraq, Afghanistan, Libya by acquisition of petroleum and to avoid going to Britain for Iran citizens. The protesters made effort to interfere and rob into jewelling shops in Enfield and Wood Green, London. The so-called Britishmen can be seen clearly.It needs to guess that BBC, getting chance to broadcast free news is broadcasting the robbery news less. BBC has to announce just only permission of the Royal family. It is in the position onapar with the news of the Royal family. The fault can not be seen itself for BBC with VOA, RFA and DVB broadcasting agencies, BBC is in hamony by talking about the gossips of others.The British government selected the members for administration and the Queen ratified the appointment. Administrative members and Director General were appointed. DG isachairman of the board of the management of BBC. Under that position, there is an Executive Director. The expenditure of BBC is permitted by the British perliament annually. For overseas broadcasting programme perliament permits about £15,000,000 annually. The declaration that BBC does not concern with government and private broadcasting station, isalie. Similarly British Government is interfering on the unrest of international countries. The process of this riot was regarded definitely as retribution immediately. Myanmar Express
ဒေါင်းမလေး လှပရဲ့ ဒါပေမယ့်ကွယ်...... (How pretty you are ! Pea-hen.......But) (ပေးစာ - ၃၂)
How pretty your dancing at the front view ! At the back side , everybody knows that she can’t take her shame. Like that, today in the world, without finding self weak-point and shame, there are many countries which see someone’s weak-points intensively. They don't cover their shame. They pointedafinger at the other's shame and guilt. They shouted about human rights, the causes of democracy, terrorist activities, violence and various causes.Then they made pressure and influences and bossed around the internal affairs of other countries. They invaded other countries if those countries did not agree their policy. They were doing such kind of nonsense but they shouted from radio, television that they were right. In starting to dug out the hiding phenomenon and making the fabricated story, Britain may beahigh boss but they could not make peace their internal affairs . In spite of improving technology, arms and ammunition, the terrorist activities were occuring. The poverty gap, the segregation of races, the segregation of colours and the relationships could not be made conveniently. It was the terrible recklessnessastudent killedaperson by shooting. The sudden demonstrations could not be controlled. If it occured, it spreaded through all over the world . This nation is Britain which is shouting itself asalarge democratic nation. As you all know, on6August 2011, at Tottenham , northern part of London, Britain, the riot started to occur terribly. It could be thought as an anarchy. That incident started last4August. Two hundred people started procession and protests. Then protesters were becoming more and more up to terrorist riot. To Birmingham, Liverpool, Nottingham, Bristol region, the riot spreaded through and protests, robberies and violences appeared. The police force suppressed the protesters by using bludgeons. The violence and demonstration were gradually worse. The protesters made the terrorist activities, such as destroying the police vehicles, ignition the department stores, and making robberies . They used petrol buckets, in the city the arsons consecutively occured. It was known all over the world. Asamatter of fact, in England, it is not strange incidents like this riot. In the previous days, this kind of incident had occured too. In 1985, Broadwater Farm riot had been known all over the world that it was very, serious and terrible. In the Daily Telegraph newspaper, it described that the London riot was only making the crimes and it was the unlawful undertaking. The reporters who went to the incident to get the news from BBC, were beaten. It was proved that the dwellers living in their residential town did not trust and like the BBC reporters who were always made advantages and instigation. Was it to be said as the retribution or was it the demonstration of the fault done by the so-called the big democrative country? The riot and disturbance were really terrible and frightful. It was the shameful deed among the international communities because of the blind to see own’s fault. As for them, they were not able to control their internal affairs and they encountered the problems and hardships around them. This is just likeapea-hen which mearly knew dancing but did not know its own shame. England, the pea-hen, you are very beautiful really in dancing but the shame(anus) can be seen. This is what I would like to say.ဒေါင်းမလေး လှပရဲ့ ဒါပေမယ့်ကွယ်...... ၁။ ဒေါင်းမလေးကနေတာ ရှေ့ကကြည့်ရင်တော့ လှနေပါရဲ့၊ နောက်ကကြည့်ရင်တော့ သူ့အရှက်တရားက မဖုံးနိုင်၊ မဖိနိုင်လုံးလုံးလျားလျားပေါ်နေတာကို လူတိုင်းသိကြမှာပဲ။ အဲဒီလိုပဲ ယနေ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာလည်း ကိုယ့်ဟာကွက်၊ ကိုယ့်အရှက်ကိုမတွေ့ဘဲ သူတစ်ပါးရဲ့ဟာကွက်ကိုပဲ မရမကရှာကြည့်တတ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေ ရှိတယ်။ ကိုယ့်အရှက်ကိုလုံအောင်မဖုံးနိုင်ဘဲ သူတစ်ပါးရဲ့အရှက်ကိုလက်ညိုးထိုးအပြစ်ပြောတတ်ကြတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ အကြမ်းဖက်အရေး၊ ဆူပူမှုအရေး၊ ပြီးတော့ ဘာအရေး ညာအရေး စုံတကာ့ စုံအောင်ဟစ်အော်ပြီး သူတစ်ပါးပြည်တွင်းရေး၊ နိုင်ငံရေးတွေမှာ ဆရာကြီးဝင်လုပ်ကြ၊ သြဇာပေး၊ ဖိအားတွေ ပေးလေရဲ့။ မထင်ရင်မထင်သလို စစ်ရေးနဲ့ကျူးကျော်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်တာကို လုပ်နေပါလျက် သူတို့လုပ်ရပ်ကပဲ လုပ်ရပ်မှန်နေကြောင်း ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားတွေကနေ ဟစ်ကြွေးကြပြန်တယ်။ ၂။ ငုတ်နေတာကိုပေါ်လာအောင် အစပျိုးတဲ့နေရာမှာ၊ မဟုတ်တာကို ဟုတ်သယောင်ထင်ရအောင် ကလိမ်စေ့ဉဏ်တတ်တဲ့နေရာမှာ ဆရာကြီးတစ်ဆူဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ပြည်တွင်းရေးတော့ ငြိမ်သက်အောင် မလုပ်နိုင်ရှာဘူး။ နည်းပညာ၊ လက်နက်ကိရိယာ၊ အတတ်ပညာတိုးတက်နေပါလျက် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု တွေ့ကိုခံနေရတယ်။ ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှု၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ အသားရောင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကို ပြေလည်အောင်မလုပ်နိုင်ရှာဘူး။ ရမ်းကားလိုက်တာကလည်း ကျောင်းသားလေးကသေနတ်နဲ့လူသတ်တဲ့ အထိပါပဲ။ ထစ်ကနဲ ထထပြီး ဆန်္ဒပြဆူပူမှုတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်ကြဘူး။ ဖြစ်လိုက်ရင်လည်း ကမ္ဘာကျော်။ ဒီနိုင်ငံကတော့ သူ့ကိုယ်သူ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးပါလို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံပါပဲ။ ၃။ အားလုံးသိကြမှာပဲ ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ လန်ဒန်မြို့မြောက်ပိုင်း၊ တော့တင်ဟမ်းမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၆)ရက်နေ့မှစပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းက ကြောက်ခန်းမလိလိ၊ မင်းမဲ့တိုင်းပြည်လားတောင် ထင်ရမလောက်ပဲ။ ဖြစ်စဉ်က ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ(၄)ရက်နေ့မှာစတယ်။ လူ ၂၀၀ ခန့်ပါဝင်တဲ့ လမ်းလျှောက်ဆန်္ဒပြမှုတစ်ခုကို စတင်လိုက်တာ ဆန်္ဒပြသူတွေပိုမိုများပြားလာပြီး နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်တဲ့ အဓိကရုဏ်းအထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ဘာမင်ဂမ်၊ လီဗာပူးလ်၊ နော်တင်ဟမ်၊ ဘရစ်္စတန် စတဲ့ဒေသတွေကိုပါကူးစက်ခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြမှုများနှင့်အတူ လုယက်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက နံပါတ်တုတ်တွေအသုံးပြုပြီးနှိမ်နင်း ခဲ့တယ်။ ဆန္ဒပြမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာခဲ့တယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေက ရဲကားတွေကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ကုန်တိုက်တွေကိုမီးရှို့ခြင်း၊ ပစ္စည်းလုယက်ခြင်း စတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဓာတ်ဆီပုံးများအသုံးပြုပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြလို့ မြို့တော်အတွင်းမှာ မီးလောင်မှုများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ် ဆိုတာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးအသိပဲဖြစ်တယ်။ ၄။ တကယ်တော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ယခုလိုအဓိကရုဏ်းဖြစ်တာတွေဟာ မဆန်းတော့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုလို့ ရပါတယ်။ ယခင့် ယခင်တွေကလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်က Broadwater အဓိကရုဏ်း တစ်ခု ကလည်း ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကြောက်ခန်းလိလိဆိုတာ အားလုံးအသိပဲဖြစ်တယ်။ Daily Telegraph သတင်းစာကလည်း လန်ဒန်အဓိကရုဏ်းသည် ရာဇ၀တ်မှုများကိုပြုလုပ်နေခြင်းသာဖြစ်ပြီး ဥပဒေနှင့်ကျူးလွန်နေ ကြသောလုပ်ရပ်များဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြသည်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ သတင်းဌာနဆိုလို့ အဲဒီအဓိကရုဏ်း သတင်းကိုရယူဖို့သွားတဲ့ ဘီဘီစီသတင်းဌာနက သတင်းထောက်တွေ ရိုက်နှက်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါသည်။ နေရာတကာဖွဖို့၊ ပွဖို့ပဲကြိုးစားနေတဲ့ ဘီဘီစီသတင်းသမားတွေကို သူတို့ဒေသခံတွေကတောင် မယုံဘူး၊ မကြိုက်ဘူးဆိုတာကို သာဓကပြလိုသလိုပါပဲ။ ၅။ ဒါဟာ ကာလ၀ိတ်ဘတ်နောက်ပိုးတက်တယ်ပဲပြောရမလား၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ အမှားသရုပ်ပြ လို့ပဲဆိုရမလား။ အကြမ်းဖက်မှုအဓိကရုဏ်းက ကြောက်စရာကောင်းလှပါဘိ။ သူများမျက်ချေးသာမြင်ပြီး ကိုယ့်မျက်ချေးကိုယ်မမြင်နိုင်တော့ လူပုံအလယ်မှာ အရှက်ကွဲရပြန်တယ်။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းရေး ကိုယ်တိုင်မထိန်း နိုင်တော့ အရူးမီးဝိုင်းခံရသလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၆။ ကဖို့သာသိပြီး ကိုယ့်အရှက်ကိုလုံခြုံအောင်မဖုံးနိုင်ရှာတဲ့ ဒေါင်းမလေးလိုဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ်။ အင်္ဂလန်ဆိုတဲ့ ဒေါင်းမလေးရေ လှတော့လှပါရဲ့ ဒါပေမယ့် ဟိုအ၀ှာပေါ်နေတယ်လို့သာ ဆိုလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
ဒေါ်စုမှ ညီညွတ်ကြဖို့ ပြောသော်လည်း စင်္ကာပူရောက်မြန်မာများ မညီညွတ်နိုင်ကြသေး (ပေးစာ - ၃၁)
၂၆-၀၉-၂၀၁၁ Singapore နိုင်ငံတွင် လိမ်လည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွါးခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ Shwe Thadar Pte.Ltd. (111 North Bridge Rd #04-45A, Peninsula Plsza, Singapore 179098) ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ စံဦး (၂၆ နှစ်) Passport No.863028၊ Employment Pass FIN No.G0648722Q ကိုင်ဆောင်သူသည် မြန်မာသံရုံးတွင် Passport သက်တမ်းတိုး၊ အခွန်ဆောင်၊ မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံစာများကို ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာများနှင့်အတူ တရားဝင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေသူဖြစ်သည်။ အဆိုပါနေ့စွဲတွင် Passport စာအုပ် ၄၂ အုပ်၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာများ၊ အခွန်ဆောင်ရန် ငွေကြေး (S$ 100,000) တစ်သိန်းနီးပါးနှင့်အတူ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသည်။ အဆိုပါနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဒေါ်သန်းသန်းနု (သပြေနု) မှ၊ အခွန်ဆောင်ရန်အပ်နှံထားသော စာအုပ်များကို ပြန်လည်ရယူရန် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်တောင်းယူရာတွင် ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ၄င်းရှိနိုင်သည်ဟု သတင်းရရှိသော "မိုး" PP အခွန်ဆောင်၊ သက်တမ်းတိုး အကျိုးဆောင်အိမ် (BLK-27, #05-186 Lorong 6, Toa Payoh, S310027) သို့ လိုက်လံရှာဖွေရာ တရားခံအားမတွေ့ရပဲ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်သဒ္ဒါဖြူနှင့်သာတွေ့ဆုံခဲ့ရသည်။ ဒေါ်သဒ္ဒါဖြူကို စစ်ဆေးမေးမြန်းရာ သားဖြစ်သူ စံဦးသည် ငွေများနှင့်ထွက်ပြေးသွားကြောင်း၊ သူမ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုပါ ပေါင်နှံထားကြောင်းသိရသည်။ ၄င်း၏သားဖြစ်သူ စံဦး၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် သူမနှင့်မည်သို့မျှမသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ မည်သို့မျှလုပ်ဆောင်မပေးနိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များမှာ စံဦး၏ Employer ဖြစ်သူ မအေးမာ (ASK AMYA Travels and Tours Pte.Ltd) ထံတွင် အပ်နှံထားကြောင်းဝန်ခံပြောဆိုသည်။ အထက်ပါဝန်ခံချက်အရ မအေးမာ၏ နေအိမ် (Blk-113, Braddle Rd, Lorong 1) တွင် PP (passport) စာအုပ်များကို လိုက်လံသိမ်းဆည်းရာ၊ စာအုပ်များနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရရှိသည်။ သိမ်းဆည်းရရှိသော စာအုပ်များကို ဒေါ်သန်းသန်းနု (သပြေနု) မှ သက်ဆိုင်ရာကာယကံရှင်များအား ၂၇-၀၉-၂၀၁၁ မှစပြီး ပြန်လည်ပေးအပ်လျက်ရှိရာ အချို့သောဆက်ဆိုင်သူများမှာ ယနေ့တိုင် လာရောက်ယူဆောင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ တရားခံ စံဦးမှာလည်း ယနေ့တိုင် လွတ်မြောက်ဆဲဖြစ်သည်။(DVB နဲ့ မြန်မာအတိုက်အခံတွေကိုများ အားကျလေရော့သလား.. ဒါမှ မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်တွေများလား)
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ် တာဝန်ယူချိန်ကစပြီး ထောက်ခံသလား၊ မထောက်ခံဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းက လူတိုင်းကမေးကြတယ်။ သတင်းမီ ဒီယာသမားများကလည်း မေးကြတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပမီဒီယာတွေက ပိုမေးကြတယ်။မူကိုင်စွဲသူဖြစ်လို့ ကိုယ်တိုင်က ဒီနယ်ပယ်သား ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ မေးသမျှဖြေပါတယ်။ မူတစ်ခု အခိုင်အမာ ကိုင်စွဲရပ်တည်တဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပိုပြီး သိချင်ကြတဲ့သဘော ဖြစ်လိမ့်မယ် ယူဆတယ်။ ဘာစာရေးရေး ကိုင်စွဲထားတဲ့ မူအတိုင်းပဲရေးတယ်။ သတင်းသမားမို့ သတင်းရေးသလို 'လိုတိုရှင်း' ရေးတယ်။ စကားပြောတဲ့ အခါမှာလည်း ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ပဲ ပြောတယ်။ ဝေ့လည်ချောင်ပတ် ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး။ ဘယ်သူ့ မျက်နှာမှလည်း ကြည့်မနေဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေလို အလိမ္မာ ဖက်မပြောတတ်လို့ စိုးရိမ်တဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များကတောင် မကြာခဏလှမ်းပြီး သတိပေးကြတယ်။ခေါင်းမာသူသတိပေးသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပေမယ့် မူနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ နည်းနည်းမှအထိမခံဘူး။ ဒါကြောင့် လူအတော်များများက 'ခေါင်းမာသူ' လို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ခေါင်းမာတာမဟုတ်ဘူး။ ရောယိမ်းလိုက် ဘသားယိမ်းလိုက် မလုပ်တာပါ။ အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ချိန်ကစပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း လျော့ချသွားတာပေါ့တို့ ၊ မရှိတာနဲ့စာရင် ရှိတာက ကောင်းတာပေါ့တို့ ဆိုတဲ့အသံတွေ ကျယ်လောင်လာခဲ့တယ်။ နောက်တော့ အားလုံး ယိမ်းဝင်ကကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ'ယိမ်းကတဲ့ထဲ ၀င်မပါဘူး'ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အတိအလင်း ရေးခဲ့တယ်။တကယ်လည်း ဘာမှမရေးခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်မူအတိုင်းရပ်ခဲ့တယ်။သတင်းသမားမူနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားမူသတင်းသမားရဲ့မူက နိုင်ငံရေး သမားရဲ့ မူနဲ့ မတူဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားရဲ့ မူဆိုတာက သူ့ပါတီက ချမှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ ပါတီကို အမြဲနာခံရတယ်။ ပါတီကဖြူရင် လိုက်ဖြူရပြီး ပါတီကမည်းရင် လိုက်မည်းရတယ်။ မလိုက်နာနိုင်ရင် ပါတီက ထွက်ပြီး အပြင်မှာ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်လုပ် နိုင်တယ်။ ပါတီထဲမှာရှိနေသမျှ ပါတီကို နာခံရတယ်။ ဒါနိုင်ငံရေးပါတီတိုင်း ချမှတ်ထားရမြဲ စည်းကမ်းဖြစ်တယ်။ ဒီလိုစည်းကမ်း မျိုးမရှိရင် ပါတီပျက်မှာပဲ။ တစ်ယောက်တစ်မျိုး ထင်ရာတွေလုပ် ကုန်ကြမှာပေါ့။ အတွင်းစိတ်က သတ်မှတ်တာသတင်းသမားမူဆိုတာက ပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ချမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ကမှ ညွှန်ကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ သတင်းသမားကိုယ်တိုင်ရဲ့အတွင်း အဇ္ဈတ္တစိတ်ကလေးက သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်။ အဲဒီ အဇ္ဈတ္တစိတ်ကလေး (Conscience) ကပဲ သူ့ကို တည်ဆောက်ပေးတယ်။ သူ့အတွက် အမှားအမှန် အကောင်းအဆိုးကို ညွှန်ပြပေးတယ်။ လောကလူသားမှန်သမျှ သူတို့ရဲ့ အဇ္ဈတ္တစိတ်ကလေးက ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အတိုင်း လိုက်ပါလုပ် ဆောင်နေကြရတာ ဖြစ်တယ်။ပြည်သူက ပြဋ္ဌာန်းပေးလိမ့်မယ်သတင်းသမားဟာ သူ့အဇ္ဈတ္တ ကလွဲပြီး ဘယ်သူ့အမိန့်ကိုမှမနာခံဘူး။ ဘယ်သူ့ ညွှန်ကြားချက်ကိုမှလည်း စောင့်ဆိုင်းနေစရာ မလိုဘူး။ သူ့အတွင်းစိတ်ကလေးက ဖန်တီးပေးတဲ့မူကို ကိုင်စွဲပြီး လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ရတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သူ့ပြည်သူလူထုက ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်လိမ့်မယ်။ သတင်းသမားဟာ သူ့အဇ္ဈတ္တနဲ့ သူ့ပြည်သူလူထုကလွဲပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ နာခံစရာမလိုဘူး။ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှလည်း ထောက်စရာမလိုဘူး။ ရေးစ ရာရှိရင် ရဲရဲရေးပြီးပြောဖို့ လိုအပ်ရင် ပြတ်ပြတ်သားသားပြောရမယ်။ ပြည်သူ့စွမ်းအား (People Power) ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံတယ်။ အခုတော့ ခဏလေး စောင့်လိုက်ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ကို နည်းနည်းလေး အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ ခဏကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ခဏလေးပါ . . . ဘယ်အာဏာရှင်မှမကြိုက်သိချင်လို့ မေးလာကြသူအားလုံးကို ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ပဲ ဖြေပါမယ်။ အာဏာရှင်စနစ် မှန်သမျှ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်း မထောက်ခံ ဘူး။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်း မထောက်ခံဘူး။ ကလိတိတိ၊ ရိတိ တိမေးချင်သူတွေကိုလည်း ဒီကနေ အတိအလင်းဖြေလိုက်ပါမယ်။ ကွန်မြူနစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်း မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အောက်ခြေက ဆင်းရဲသားလူတန်းစားတွေသွေး စုပ်မခံရအောင် အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ကားလမတ်စ်ရဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကိုတော့ ဒီနေ့အထိ နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်နေဆဲဖြစ်တယ်။ စောင့်ကြည့်ဆဲကိုယ့်အဇ္ဈတ္တက ပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်တဲ့ မူအတိုင်း မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် အစိုးရကို မထောက်ခံခဲ့သလို သူ့ကိုဆက်ခံတဲ့ အစိုးရတွေကိုလည်း မထောက်ခံဘူး။ အမျိုးသားညီလာခံနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မထောက်ခံဘူး ဆိုတာလည်း သတင်း မီဒီယာတွေကတစ်ဆင့် အတိအလင်းပြောခဲ့တယ်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကိုလည်း မထောက်ခံသေးဘူး။ စောင့်ကြည့်ဆဲ အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။ ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ ဦးသိန်းစိန်က ပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လေးစားရမယ်။ ပြည်သူတွေ လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်မယ်။ ဒီမိုကရေစီလိုလား သူအားလုံးနဲ့လည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်မယ်။ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာ အရေးပါတဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကူညီမယ်စတဲ့ စကားများကို ပြောသွားခဲ့တယ်။ ဒီစကားတွေဟာ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တယ်လို့ ချက်ချင်းစိတ်ထဲမှာ မှတ်သားထား လိုက်တယ်။ကြိုဆိုကြောင်းရေးခဲ့ပြောခဲ့ အဲဒီနောက် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ၀န်ကြီးဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံတယ်။ မတူတာတွေအသာထားပြီး တူတာတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ သဘောတူခဲ့ကြတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို ငြိမ်း ချမ်းရေး ကမ်းလှမ်းချက် ထုတ်ပြန်တယ်။ ပြည်ပရောက်သွားသူတွေ ပြန်လာနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ အတိအလင်း ကြေညာတယ်။ ဒါတင်မက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံနိုင်သေးသူတွေနဲ့ပါ လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ တံခါးဖွင့်ထားတယ်လို့ သမ္မတကိုယ်တိုင်က ပြောကြားခဲ့တယ်။ ကိုယ်တိုင်က အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံနိုင်သေးသူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်လေတော့ ဒီစကားကို ကြိုဆိုတယ်။ကြိုဆိုကြောင်း အတိအလင်း ရေးခဲ့ပြောခဲ့တယ်။တိုးတက်မှုလို့ ပြောနိုင် အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်ရုံမက တိုးတက်မှုလို့ပါပြောနိုင်တဲ့ အချက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ဓာတ်ပုံကြီးရှေ့မှာ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး ယှဉ်တွဲရပ်နေတဲ့ပုံကို ရုပ်မြင်သံ ကြားမှာ ဖျတ်ကနဲမြင်တွေ့လိုက်ရတော့ ပြည်သူတွေအားလုံး အံ့အားသင့်ပြီး ပါးစပ်ဟောင်းလောင်း ဖြစ်သွားကြတယ်။ နောက်နေ့မနက်ထွက်တဲ့ သတင်းစာတွေရော၊ ဂျာနယ်တွေပါ ၀ယ်မရတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်။ ပြည် သူအားလုံး ၀မ်းသာကြိုဆိုကြတယ်။ အရှိကိုအရှိအတိုင်း အဲဒီနောက်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သတင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ဂျာနယ်တွေမှာ ဖော်ပြခွင့်ရလာတယ်။ ဦးဝင်းတင်ရဲ့စာအုပ်တွေ တစ်အုပ်ပြီးတစ်အုပ် ထုတ်ဝေခွင့်ရလာလို့ လူတွေက အလုအယက် ၀ယ်ဖတ်ကြတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်တာဗျူးတွေ ထည့်ခွင့်သာမက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆောင်းပါးကို ဖော်ပြခွင့်ရလာတယ်။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လကျော် ကအိပ်မက်တောင် မမက်နိုင်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်တယ်။ အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်တာတွေချည်းဖြစ်တယ်။ သတင်းသမားဆိုတာ အရှိကိုအရှိ အတိုင်းတင်ပြရတယ်။ ဒါတွေဟာ လက်တွေ့မြင်တွေ့နေရတဲ့ အရှိတရားတွေဖြစ်ပြီး အကောင်းဘက်ကိုဦး တည်နေကြတယ်။ အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တာတွေအကောင်းဘက်ကို ဦးတည်နေတာဖြစ်တယ်။ အကောင်းဘက်ကို ရောက်သွားတာတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ မဖယ်ရှားသေးတဲ့ အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တာတွေ ရှိနေသေးတယ်။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ၊ ၈၈ လူငယ် တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအပါအ၀င် လူပေါင်းများစွာကို ပြန်မလွှတ်ပေးသေးတဲ့ကိစ္စ၊ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ စိုက်ပျိုးလယ်ယာမြေတွေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သိမ်းယူကြတဲ့ကိစ္စ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အဖိုးတန်သယံဇာတတွေကို ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ 'အေးဓားပြ' တိုက်ယူနေတာတွေကို ကာကွယ်တားဆီး မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ကိစ္စ စတဲ့ ကိစ္စတွေအတော်များများ ကျန်ရှိနေသေးတယ်။အကဲခတ်ဆဲ ဒီကိစ္စတွေကို အမြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရမယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ဟာ ဒီအရေးကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေကြတယ်လို့ ယူဆတယ်။ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပြန်အလှန် အကဲခတ်နေကြပုံရတယ်။ အကဲ ခတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကလည်း အနှစ် နှစ်ဆယ်လုံးလုံး ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ ရှိနေတဲ့သူတွေက ရုတ်တရက်ချက်ချင်းကြီး ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်မှာပဲ။ ဒါ သဘာဝကျတယ်ဆို တာကို တစ်ဖက်က နားလည်ပေးသင့်တယ်။ အလားတူပဲ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရဟာ အရပ်သားအစိုးရအဖြစ် အသွင်သဏ္ဌာန်ပြောင်းလာပေမယ့် သူတို့ရဲ့ မူလဇစ်မြစ်က နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်လုံးလုံး အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရဆိုတာ သဘောပေါက်ထားကြရမယ်။ သံသယစိတ်နဲ့ ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်က အရင် အစိုးရအဖွဲ့မှာ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်တယ်။ စစ်တပ်များရဲ့ သဘောသဘာဝကိုလည်း နားလည်ထားကြဖို့ လိုတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ သဘာဝက လုံခြုံရေးကိုအဓိက ဦးစားပေးတယ်။ ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆို လုံခြုံရေး မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်။ ချဉ်းကပ်လာသူ မှန်သမျှကို မသင်္ကာတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်တယ်။ ရန်သူ ဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့ သံသယစိတ်နဲ့ စစ်ဆေးစမ်းသပ်တယ်။ ရာနှုန်းပြည့်စိတ်ချရမှ သူတို့နား အကပ်ခံတယ်။ ဒါ သူတို့ရဲ့ သဘာဝပဲ။ စစ်မြေပြင်မှာ ဒီလိုမလုပ်ရင် ချေမှုန်းခံရမှာဖြစ်တယ်။ စစ်တပ်က ပြည်သူတွေကြားထဲ ၀င်ရောက်နေထိုင်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့အရေးကို ဆောင်ရွက်ရာမှာ စစ်မြေပြင်မှာ ကျင့်သုံးသလို ကျင့်သုံးလို့မရဘူးဆိုတာ အခုမှ နားလည်စပြုလာချိန်ဖြစ်တယ်။ ထိလွယ် ရှလွယ် ဒီလိုနားလည်စပြုလာတာကို ကြိုဆိုပြီး ပိုနားလည်လာအောင် ပြည်သူလူထုက ကူညီရမှာဖြစ်တယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွးမှုကို အချိန်နည်းနည်းယူပြီး စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ခုအချိန်ဟာ အင်မတန်မှ နူးညံ့သိမ် မွေ့တဲ့ ထိလွယ်ရှလွယ် အခြေအနေဖြစ်တယ်။ အကောင်းဘက်ကို ရောက်သွားနိုင်သလို ရုတ်တရက်ချက်ချင်း အဆိုးဘက်ရောက်ပြီး ဒုံရင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးက ခြေလှမ်း မမှားအောင် သတိကြီးစွာထား ပြီးဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်။ ဒုံရင်းပြန်ရောက်သွားရင် ထိခိုက်နစ်နာမှာက ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်။ ခဏစောင့်ကြည့် ဒုံရင်းပြန်မရောက်အောင် တားနိုင်တာလည်း ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီး အောင်မြင်အောင် တည်ဆောက်နိုင်တာကလည်း ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန်တို့က ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် အခုမှတစ်ကြိမ်ပဲ တွေ့ရသေးတယ်။ တစ်ကြိမ်တွေ့ရုံနဲ့ 'ဟပ်ချလောင်း'ဆိုပြီး ချက်ချင်းပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးဆိုတာ နားလည် ပေးသင့်တယ်။ သူတို့ကို အချိန် နည်းနည်း ပေးသင့်တယ်။ ခဏလေး စောင့်ကြည့်သင့်တယ်။ခဏကြီး၊ ခဏလေးခဏလေးဆိုတာက နှစ်ငါးဆယ်ကြာတဲ့ ခဏကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခဏကြီးကတော့ ရှည်ကြာလွန်းပြီး ခါးသီးလှပါတယ်။ ရှေ့တိုးမလား၊ နောက်ဆုတ်မလား၊ ပြောင်းမလား၊ မပြောင်းဘူးလားဆိုတာကို 'စံနှစ်ခု' နဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်နိုင်တယ်။ (၁) ထောင်ထဲကလူတွေ လွှတ်၊ မလွှတ်ဆိုတဲ့ စံ။ (၂)တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စံ။နှစ်ချက်စလုံးဆောင်ရွက်ဆဲဒီစံနှစ်ခုအနက် ပထမအချက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိစ္စကို လွှတ်တော်က ထောက်ခံထားပြီးဖြစ်တယ်။ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များကပါ ထောက်ခံတယ်။ တပ်မတော်သားဆိုတာ အထက်အမိန့်အတိုင်း တစ်သဝေမတိမ်း လိုက်နာရတာဖြစ်တဲ့အတွက် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်က ထောက်ခံတယ်ဆိုတာဟာ တပ်မတော်တစ်ခုလုံးက ထောက်ခံတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူနိုင်တယ်။ ဒုတိယအချက် ငြိမ်းချမ်းရေးစံ လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်းလှမ်းချက် ထုတ်ပြန်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတာ တွေ့ရတယ်။နည်းနည်းအချိန်ပေးပါဒီအချက် နှစ်ချက်လုပ်၊ မလုပ် မကြာမီမှာပဲ အဖြေသိရမယ်လို့ ယူဆတယ်။ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လျစ်လျူရှုပြီး ဒီအချက်နှစ်ချက်စလုံးကို ငြင်းပယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေက ကောင်းကောင်းကြီး ဒဏ်ခတ်မှာ သေချာပါတယ်။ ပြည်သူ့စွမ်းအား (People Power) ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံတယ်။ အခုတော့ ခဏလေး စောင့်လိုက်ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ကို နည်းနည်းလေး အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ ခဏကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ခဏလေးပါ။လူထုစိန်ဝင်း
ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ အချောင်စားဖို့ ကြိုးစားနေသူများ
နိုင်ငံတည်ရာမှာ ငါဟာမဏ္ဍိုင် တစ်ပါးရယ်လို့ မီဒီယာအင်အားနဲ့ အော်လို့အော် ဖွလို့ဖွ လွတ်လပ်မှုက အမှန်တရားဆိုပြီး တရားသေ ကိုင်စွဲထားသူတွေကြားမှာ စည်းကမ်းနဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ချိန်ဆကြဖို့ ညွှန်းဆိုဆုံးမ ပြောရတာလည်း လေကုန်လို့ မောလှပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက မီဒီယာ သမားတွေရဲ့ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဖော်ထုတ်ကြရာမှာ နှစ်ဘက်ချွန် သဘောနဲ့ လိုသလို သုံးနေကြတဲ့ အဖြစ်ကလေး တစ်ခုကို ပြောပြချင်လို့ပါ။ ပလာတာကို မကြိုက်သလို မူနေတော့ နွားအိုမှာ နားမလည်ရှာဘူးရယ်လို့ ဆိုပြီး သနားခဲ့မိ ပြန်ပါသေးတယ်။ ကြွေးမိတဲ့ ပလတာ အလကား အာပလာသာ ဖြစ်ခဲ့ရပြီပဲလို့ ကျွန်တော်တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ တကယ်ဆို သကောင့်သားက နားမလည်တာမှ မဟုတ်ဘဲ သူ့ဂွင်ထဲ မဝင်သေးလို့ နားမလည်ချင် ယောင်ဆောင်နေတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ကိုက အ တာပါ။ ကျွန်တော် အားမနာတမ်း ပြောရရင် ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာ လောကမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ တစ်ဘက်သတ် အမြင်နဲ့ နားမလည်ချင်ယောင် ဆောင်နေတဲ့၊ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတဲ့ ပလာတာကို မကြိုက်သလို ဟန်ဆောင်နေတဲ့ နှစ်ဘက်ချွန် နွားအိုကြီးများလို အဖြစ်များ ရှိနေကြပါတယ်။မီဒီယာတွေ အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ လွတ်လပ်ခွင့်ပါပဲ ဆိုပေမယ့် လွတ်လပ်စွာ ပြောကြတဲ့အခါမှာ ပြည်သူတွေ ရင်ထဲမှာ ဘာတွေ ဘယ်လိုရှိလို့ ပြည်သူတွေ ဘာ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ တကယ် ထုတ်ဖော်နိုင်မှ မဏ္ဍိုင်အမှန် မီဒီယာအားပါ။ လူအထင်ကြီး အောင်လုပ်ပြီး လူရှေ့ ထွက်ရရုံ အတွက် ကတော့ အမှန်တရားဟာ ဘာမှ တန်ဖိုး မရှိပါဘူး။ လူတွင်ကျယ် လုပ်ချင်ရုံ အော်ဟစ်နေယုံ နဲ့တော့ အနှစ်သာရ ပြည့်ဝတဲ့ မီဒီယာ စစ်စစ်ကိုလည်း ဖော်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ သိသင့်ပါတယ်။ အချို့ မီဒီယာသမားတွေ အနေနဲ့ အမှန်တရား၊ အမှန်တရားနဲ့ မှန်ရင်ပြီးရော သတင်းဖြစ်ပြီးရော ဆိုပြီး ပြောခဲ့ကြတာတွေလည်း ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါလည်း ထားလိုက်ပါတော့ ပြီးခဲ့တာလည်း ပြီးပါပြီ။မီဒီယာကို အားပြုပြီး နိုင်ငံတစ်ခု တည်ဆောက်ကြမယ်လို့ လွတ်လပ်ခွင့် ကြွေးကြော်သံနဲ့ အတူ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ခုချိန်မှာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို တင်ပြတိုင်း တင်ပြတိုင်း အကျိုးအကြောင်းကို ဘက်စုံထောင့်စုံက ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပြပြီး ပြည်သူကို ချပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ချပြမယ်လို့လည်း မီဒီယာသမားတွေ ကိုယ်တိုင် အော်ခဲ့ ဟစ်ခဲ့ တောင်းဆိုခဲ့ ကြတာပါပဲ။ အမှန်ကို အမှန်တိုင်း အရှိကို အရှိတိုင်း သတင်း မှန်သမျှကို လွတ်လပ်စွာ ရေးသား ဖော်ပြခွင့်ကို တောင်းဆို ခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အနေနဲ့တောင် သတင်းတွေ တင်ပြရာမှာ မှန်ကန်မှုများနဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ချိန်ထိုးကာ ချင့်ချိန်ကြဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ ရတာတွေတောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးအပြစ် အကောင်းအဆိုးကို ချိန်ထိုးပြီး ဘယ်ဟာက ဘယ်လိုဆိုပြီး တင်ပြကြတဲ့ အခါမှာ မီဒီယာဟာ အတ္တကင်းတဲ့ အရိယာမဟုတ်ဘူး ပုထုဇဉ်တွေ ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ သိတာမှ ဟိုဘက်တောင် လွန်နေသေးတယ်။ ဒါကြောင့် မီဒီယာတွေအနေနဲ့ မှားယွင်း ဖော်ပြမိတာတွေ၊ တင်ပြမိတာတွေ ရှိနေနိုင်ပေမယ့် ဒါတွေလည်းပဲ ပြောမနေတော့ပါဘူး။နည်းပညာတွေ အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ကမ္ဘာ့ဟိုဘက်ခြမ်း ဒီဘက်ခြမ်း စည်းခြားထားတဲ့ ကန့်သတ် ချက်မျိုး မီဒီယာမှာ မရှိပါဘူး။ ခုခေတ်မှာ သတင်းဆိုတာ အချိန် ကန့်သတ်ချက် နေရာ ကန့်သတ်ချက် စတဲ့ ကန့်သတ်ချက် တွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ အတော်ခက်ခဲ သွားပါပြီ။ ကမ္ဘာ့ ဟိုဘက်ခြမ်းက သတင်းတစ်ခုကို ကမ္ဘာ့ ဒီဘက်ခြမ်းကနေ စက္ကန့်မခြား သိရှိနိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ။ သိကြားမင်း နားကင်းကြီးနဲ့ ဆင်းတားရင်တောင် မီဒီယာကို တားထားလို့ မရနိုင်ပါဘူးလို့ ဆိုရင် ဒါအပိုပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မီဒီယာရဲ့ ထိရောက်မှုက အစွမ်းထက်လှပါတယ်။ ဆန္ဒဂတိ၊ ဘယာဂတိ၊ မောဟဂတိ၊ လာဘဂတိ ဆိုတဲ့ အဂတိတရား လေးပါးရဲ့ ကြိုးဆွဲရာမကဘဲ အမှန်တရားကိုသာ လက်ကိုင်ထားမယ့် မီဒီယာ သမားများအနေနဲ့ ပြည်သူတွေကို သိသင့် သိထိုက်တာတွေ ဖွင့်ချအသိပေးဖို့ တာဝန်ရှိတယ် ပြည်သူတွေ မသိသေးရင် အသိပေးရမယ့် တာဝန်ဟာ မီဒီယာတာဝန်ပဲ။ ကျွန်တော် ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်လို့ တစာစာ အော်နေတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက မီဒီယာသမားတွေ ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာ။အနီးဆုံး ဥပမာတစ်ခု ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်မယ်လို့ ဆိုကြတော့ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ထောက်ခံတဲ့ သူရှိကြသလို သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်လို့ ကန့်ကွတ်သူလည်း ရှိတယ်။ ကန့်ကွက်တာတွေ ထောက်ခံတာတွေထက် ပြောချင်တာက မီဒီယာ ကဏ္ဍအနေနဲ့ ပြည်သူအသံကို လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့တာကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဧရာဝတီကိစ္စမှာ အမှန်အမှားကို ဘေးခဏ ချိတ်ထားပြီး ပြောရရင် ပြည်သူ့ကိုယ်စား ပြောခဲ့ကြတာတွေ ရေးခဲ့ကြတာတွေကို လွတ်လပ်စွာ ရေးသား ဖော်ပြနိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ ပေတံ အနေနဲ့ပဲ ပြောရရင် မီဒီယာတာဝန် ကျေတယ်လို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့မှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်က စတင် အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Burmese Freedom and Democracy Act ကို သက်တမ်းတစ်နှစ် ထပ်တိုးဖို့ အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော်က အတည်ပြု ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အရေး လူအခွင့်ရေးစတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ သိသာထင်ရှားစွာ အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အချိန် မြန်မာ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ကလည်း ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုနေကြတဲ့ ကြားထဲက ပိတ်ဆို့မှု သက်တမ်း ထပ်မံ တိုးမြှင့်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူအခွင့်အရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီရေး အတွက် ရှေ့ဆောင်နိုင်ငံကြီး တစ်နိုင်ငံ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လတ်တလော တိုးတက်လာတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လူအခွင့်အရေး အခြေအနေတွေ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးတွေကို လစ်လျှူရှုလိုက်တာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အရှိန်အဟုန်တွေ ရပ်တန့်သွားအောင် လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဒီလို ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ အကျိုးပြု လုပ်ရပ် မဟုတ်ဘဲ ဆိုးရွားတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကိုသာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မယ် ဆိုတာ အားလုံးက သိနေပါလျက်နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက မသိနိုင်တာဟာ သဘောရိုး မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ပိုဆိုးရွားတာက ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေရဲ့ အကျိုး သက်ရောက်မှုဟာ ပြည်သူတွေကို တိုက်ရိုက် ထိခိုက် ခံစား စေနိုင်တာကို သိရှိနေပါလျှက်နဲ့ မီဒီယာတွေ အနေနဲ့ ရေငုံနှုတ်ပိတ် တိတ်တိတ်ကလေး မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြ တာဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာသမားတွေရဲ့ အမှန်ကို အမှန်တိုင်း လွတ်လပ်စွာ ရေးသား ဖော်ပြ နိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ ပေတံနဲ့ရော ကိုက်ညီ ကြပါရဲ့လား ပြန်မေးကြည့် ကြပါဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ပိတ်ဆို့မှု သက်တမ်းတိုးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကို မီဒီယာတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်စား မပြုနိုင်လို့လားလို့ မေးချင်လာပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ကတော့ ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာ ရင်ဖွင့်စရာ မရှိဘဲတော့ မနေလောက်ပါဘူး။ပြည်သူထဲက ပြည်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ပြောစရာတွေ ရင်နဲ့ အပြည့်ပါ ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ရင်ဖွင့်လိုက်ရတာပါပဲ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုရင်ဖွင့်ခွင့် မရသေးတဲ့ အခြားသော ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ရော ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။ ဘယ်သူတွေကများ ဒီ ကျန်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကိုရော ကိုယ်စားပြုပေး ပါ့မလဲလို့ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတော့ ကျွန်တော်ရင်ထဲ ဆို့လာပြီး ကျွန်တော့် အသံတွေတောင် တိမ်ဝင်သွားရပါတယ်။ မီဒီယာက ဒီအသံတွေကို မကြားတာ လားလို့ တစ်ယောက်တည်း မေးနေမိပါတယ်။ ပြည်သူတွေကိုရော အမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြု ကြရဲ့လားလို့လည်း သံသယ ဝင်မိပါတယ်။ ဒီလို မဏ္ဍိုင်မျိုးနဲ့ သာဆိုရင်လို့ ဆက်လည်း မတွေးရဲတော့ပါဘူး ပြည်သူ့ကို အမှန်ကိုယ်စားပြုတဲ့ မီဒီယာ စစ်စစ် ဖြစ်စေချင်တဲ့ ကျွန်တော့ဆန္ဒကို ဘယ်လိုပြောပြရ ပါ့မလဲ ဆိုတာလည်း မသိတော့ပါဘူး။ ဒါတွေကလည်း မိကျောင်းမင်း ရေခင်းပြသလို ပြောတဲ့သူပဲ မောရဦးမှာမို့ …..နိဂုံးအနေနဲ့ နိဒါန်းလေးကိုပဲ ပြန်ချီလိုက်ပါရစေတော့အားမနာတမ်းပြောရရင် ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာ လောကမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ တစ်ဘက်သက် အမြင်နဲ့ နားမလည်ချင်ယောင် ဆောင်နေတဲ့၊ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတဲ့ ပလာတာကို မကြိုက်သလို ဟန်ဆောင်နေတဲ့ နှစ်ဘက်ချွန် နွားအိုကြီးများလို မီဒီယာ သမားများ ရှိနေကြပါတယ် ခင်ဗျားလို့။ ဒီလူတွေဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ မျက်နှာကို မကြည့်ဘဲ ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ အချောင်စားဖို့ အကွက်ဆင် ဂွင်ဖန်နေတဲ့ အတ္တသမားတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ဒီဖြစ်ရပ်တွေက သက်သေပြနေပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အဖြစ်က နွားကို ပလာတာ ကြွေးနေမိတာပါ။ မျိုးချစ်မောင်http://kyeesaytaman.blogspot.com/2011/10/blog-post_05.html မှ ကူးယူဖော်ပြပါကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအပေါ် ဆန့်ကျင်သည့် အတွေးအခေါ် များဖြင့် ထုတ်လွှင့်လျက် ရှိသည့် နော်ဝေနိုင်ငံ အခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ DVB သတင်းဌာနတွင် ငွေကြေး အလွဲသုံးစား လုပ်မှုများကြောင့် အုပ်ချုပ်သူ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အတွင်း သဘော ကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိသည်။ လက်ရှိ DVB ယာယီ ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဟန်ညောင်ဝေက ငွေကြေး ကွာဟမှု အဓိက ဖြစ်ပွားရာ နေရာသည် မဲဆောက် အခြေစိုက် ဌာနခွဲမှ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။ ဦးဟန်ညောင်ဝေ၏ ပြောစကား များနှင့် ပတ်သက်ပြီး မဲဆောက် အခြေစိုက်ဌာနမှ ဦးဆောင် တာဝန်ရှိသူ ကိုစံ (ခ) ကိုအောင်ထွန်းက အပေါ်ယံ စွပ်စွဲချက်သာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဦးဟန်ညောင်ဝေ၏ ပြောစကားအရ တာဝန်ရှိသူ (၃)ဦး ဆိုသည်မှာ မည်သူ့ကို ပြောကြားသည် ဆိုသည်ကို ကွဲကွဲပြားပြား မသိပါကြောင်း ကိုစံက ဆက်လက် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ငွေကြေး အလွဲသုံးစား လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်ယောက်ကဖော်၊ တစ်ယောက်ကဖုံး ဆိုသလို ကိုယ့်အပြစ်ကို ကိုယ်ပြန်ဖုံး နေကြလား မပြောတက် တော့ပေ။ မြန်မာ့အစိုးရ အဆက်ဆက် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သမျှကို အကောင်းမမြင်၊ ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေးအခေါ် များဖြင့် ပြည်သူများအကြား စိတ်ဝမ်း ကွဲပြားအောင် ထုတ်လွှင့်ပေး နေသည့် အကျိုးတစ်စုံ တစ်ရာမရှိသည့် DVB အသံလွှင့်ဌာန အနေဖြင့် မိမိတို့ အုပ်ချုပ်မှု အပိုင်းအတွင်း အကျင့်ပျက် ခြစားမှုမျိုးကို လုပ်ဆောင်သည် မှာလည်း အဆန်းတစ်ကြယ် ကိစ္စ ဟုတ်မည်မထင်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မကောင်းကြောင်းကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ပြောရဲသော အရှက်မရှိသည့် DVB အသံလွှင့်ဌာန အဖို့ ယခု ငွေကြေး အလွဲသုံးစား လုပ်မှုကိုလည်း ရှက်ကြောက် နေလိမ့်မည် မထင်ဟု စာရေးသူ သုံးသပ်မိပါသည်။ ယာယီရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ထားသည့် ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးချမ်းနိုင်နှင့် လက်ထောက် ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်း တို့ကိုလည်း နော်ဝေရဲဌာနမှ အမှုဖွင့် စစ်ဆေးခံနေ ရကြောင်း သိရသည်။ မဲဆောက် အခြေစိုက် ဌာန အနေဖြင့်လည်း ဦးဟန်ညောင်ဝေ၏ စွပ်စွဲချက်များသည် မှန်ကန်မှု မရှိဟု အခိုင်အမာ ပြောဆိုနေပြီး၊ အော်စလိုမှ ၎င်းတို့၏ Network များကို တိုက်ရိုက်ခြယ်လှယ် လိုသည့်အတွက် ဦးဆောင်လှုပ်ရှား နေသူများအား ငွေကြေး အကြောင်းပြကာ ဖယ်ရှားလိုခြင်းဟု ဆိုထားပါသည်။ ထို့ပြင် မဲဆောက်ဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ များကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းထားပြီး ရာထူးမှ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်း နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆို ထားပါသည်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု စသည့် မဟုတ်မမှန် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် မြန်မာအစိုးရ အပေါ် ဝေဖန် အပုပ်ချနေသည့် DVB သည် ၎င်းအဖွဲ့အတွင်း အပြန်အလှန် အပုပ်ချ နေသည်မှာလည်း အရေးကြီးသည့် အရာ မဟုတ်ပါကြောင်း ရေးသား လိုက်ရပါသည်။ စောရန်နိုင်http://shwepyithit.blogspot.com/2011/10/blog-post_05.html မှ ကူးယူဖော်ပြပါကြောင်း
အတိုက်အခံ အင်အားစုများရဲ့ ငွေကြေးအရှုတ်တော်ပုံများကို ဆက်လက်ဖွင့်ချမည်
ပြည်ပ အခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB) ရဲ့ ငွေကြေး အရှုပ်တော်ပုံ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်လို့ DVB က စာနယ်ဇင်းရှင်းတမ်းအဖြစ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေဟာ ပြည်တွင်းက သတင်းထောက်တွေ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် ချင်းမိုင်က သတင်းထောက်တွေနဲ့ မပတ်သက်တဲ့အတွက် ရုပ်သံနဲ့ သတင်းလွှင့်ချက်တွေကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လောလောဆယ် အရှုပ်ထုပ်ကို ရှင်းနေချိန်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေချိန်မှာ DVB ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တာဝန် အရှိဆုံး လူတွေဖြစ်တဲ့ ကိုခင်မောင်ဝင်းနဲ့ ကိုအေးချမ်းနိုင်တို့ နုတ်ထွက်ပြီး လောလောဆယ် စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းကို ဦးဟန်ညောင်ရွှေက တာဝန်ယူထားပါတယ်။ DVB လိုသတင်းဌာနတစ်ခုကတောင် ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုရှိတယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ အဖွဲ့ တွေ ဘယ်လောက်တောင်ဆိုးလိုက်မလဲဆိုတာ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ နိုင်ငံရေးကို အကြောင်းပြပြီး ငွေတောင်းတဲ့အဖွဲ့ တွေ...NCUB/NCGUB/FDB/ AAPP/ FTUB စတဲ့ ထိုင်းအခြေစိုက်အဖွဲ့ တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ-နှစ်ကျော်ကတည်းက နာမည်အမျိုးမျိုး ခေါင်းစဉ်အမျိုးအမျိုးနဲ့ပြည်ပအန်ဂျီအိုတွေကနေ တောင်းစားလာတာ ကြာပါပြီ။ အဲဒီမှာ အဆိုးဆုံးက ပြည်တွင်းယူဂျီလုပ်ငန်းအတွက် သုံးတဲ့ငွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းဇယားကို ဘယ်လို ရှင်းရမှန်းတောင်မသိကြပါဘူး။ အစိုးရကို ခိုးတယ်လို့ အမြဲ စွပ်စွဲနေကြတာ သူတို့ဖြစ်ပြီး စွပ်စွဲနေတဲ့ ပြည်ပ အတိုက်အခံတွေအားလုံးကလည်း သူခိုးကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက အတိုက်အခံတွေကလည်း အမျိုးမျိုး လိမ်စားကြပြန်ပါတယ်။ ဦးဟန်ညောင်ရွှေဟာ တော်လှန်ရေးစားဖားကြီးတစ်ကောင်ဆိုတာ အစောကတည်းက အားလုံးသိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ တချိန်လုံး ဂွင် ပဲ ချောင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပဲမဲတဲ့လူပါ။ ဘယ်ရောက်သွားလဲ National Reconcilation Program-NRP ၊ ဘယ်လောက်အောင်မြင်ခဲ့လဲ။ သူ့ ကြောင့်အမျိုးသားသင့်မြတ်ရေးရပြီလား။ ဘယ်မှာလဲ ရှင်းတမ်း။ EBO ဆိုက ရလိုက်တဲ့ငွေ နဲ တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဝက်ဆိုက်မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အခု ဒီဗွီဘီ က CEO ဖြစ်သွားပြန်ပါပြီ။ လစာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။ ဦးဟန်ညောင်ရွှေတို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ NLD က သက်ကျားအို ကြီးတွေအနေနဲ့ အခုလိုမျိုး အသက်ကြီးပြီး နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားတာက ထူးဆန်းပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ငွေကြေး အထောက်အပံ့သာ မရကြည့်ပါလား။ ဒီလူတွေ ဘယ်တော့မှ မလုပ်တော့ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာမှ ရှိတဲ့လူတွေက ဒီလိုမျိုး ရှေ့ ဆက်တိုးလို့ မရအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ မြန်မာအတိုက်အခံအားလုံး လိင်ကိစ္စနဲ့ ငွေကြောင့်ပဲ အားလုံးပျက်စီးရပါတယ်။ အခု ဒီဗွီဘီက ကိုမျိုမင်းအောင်ဆိုတာက မဲ့ဆောက်ကို စရောက်ကတည်းက ကွန်ပြူတာနဲ့ဆိုင်ကယ်အသစ်နဲ့ပါ။ အေအေပီပီအဖွဲ့ ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တော့ကို ဘယ်သူမှ မကိုင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ သူကလက်တော့နဲ့ ဘန်ကောက်က Dentention Center အခု သူတို့ လင်မယားပါလာသေးတယ်။ အမှန်တော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုပြီး လိမ်စားနေ သူတစ်ဦးပါ။် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဆိုသူတွေကို ယောင်မှားပြီး အထင်ကို မကြီးကြပါနဲ့။ ထောင်ထဲမှာ ငတ်နေတုန်း က ပုံစံတွေက တမျိုး။ သူတောင်းစား ထမင်းဝတော့ေ-ာက်ကြီးေ-ာက်ကျယ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးကို ဘန်းပြပြီး အသားကုန်ခိုးကြပါတော့တယ်။ အခု ဒီဗွီဘီက ၂ဝ၁ဝ-ခုနှစ် စာရင်းရှင်းတမ်းမှာတောင် မြန်မာငွေသိန်းသုံးထောင်ဆိုရင် ဒီဗွီဘီစထောင်ကတည်းက ဘတ်လိုက်တဲ့ငွေ ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာ စဉ်းစားသာ ကြည့်ကြပါတော့။နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံး ထောင်ကျနေတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ ထောင်ထဲကနေ ထွက်မလာသင့်ပါဘူး။ နိုင်ငံအတွက်လည်း အကျိုးပြုမယ့်လူတွေ မဟုတ်သလို ပြည်သူအတွက်လည်း ဘာမှမလုပ်နိုင်ကြသူတွေပါ။ ဒါကြောင့် အခု ထောင်ကျနေတဲ့ အကျဉ်းသားတွေ လွတ်လာမှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ထောင်ထဲက အခု အကျဉ်းသားတွေသာ လွတ်လာရင် အချင်းချင်း စားခွက်လုပြီး ဒီထက်ဆိုးတဲ့ ပြဿနာတွေ ထွက်လာအုံးမှာ အသေအချာပါပဲ။ပြည်ပက ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာ နာမည်မပျက်ပဲ နေတဲ့လူဆိုလို့ တစ်ယောက်မှမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်အကျိုးအတွက် ပြည်ပထွက်လာမှတော့ အားလုံးက ကိုယ့်အကျိုးအတွက်ပဲ အလုပ်လုပ်ကြတော့တာပါပဲ။ ကိုယ့်သားသမီးအနာဂါတ်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစု ချမ်းသာဖို့ပဲ ခေါင်းထဲမှာ စဉ်းစားကြပါတယ်။ ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုလိမ်တောင်းရမလဲ ဆိုတာကို အမြဲ ကြံစည်နေပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ မုန်တိုင်းတိုက်ချိန်၊ စစ်ဖြစ်ချိန် ဆိုရင် ပြည်ပအတိုက်အခံတွေ အားလုံး က အားရဝမ်းသာစွာနဲ့ ငွေတောင်းကြတော့တာပါပဲ။ ပြည်သူတွေရဲ့ လုပ်စာကို စားနေတယ် ဆိုတာ ပြည်ပ အတိုက်အခံတွေကမှ အစစ်ပါ။အခုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီး ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းဆိုပြီး လိမ်စားနေတဲ့လူတွေ သတိထားကြည့်ကြပါ။ တနေ့ ကျရင် သူတို့ရဲ့ ခိုးယူမှုတွေ ထပ်ပြီး ပေါ်လာအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ အစိုးရ အတိုက်အခံတွေ အားလုံးနဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာနဲ့ လုံးဝ မထိုက်တန်ပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာနေပြီး တောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစား တစ်ယောက်ကမှ ပြည်ပက အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေ အားလုံးထက် ဂုဏ်ရှိပါသေးတယ်။ ပြည်ပအတိုက်အခံတွေအနေနဲ့ အရည်အချင်းမရှိမှန်း၊ ငတ်လို့ ခိုးကြမှန်း နားလည်ပေမယ့် ကိုယ့်ဘာကို ခိုးတာကို သူများကို ခုတုံးလုပ်တာကိုတော့ လက်မခိုင်နိုင်ပါဘူး။ ဦးဟန်ညောင်ရွှေ ခေါ် စားဖားကြီး ဦးစိန်ဝင်းနဲ့အစိုးရဟာ ယခင်တုန်းက ဇော်ဦး၊ ဦးစိုးပိုင်၊ ကိုမောင်မောင်၊ ဦးဟန်ညောင်ရွှေ၊ ကိုသောင်ထွန်း၊ ကိုနိုင်အောင်တို့ကို အမာခံထားပြီး နိုင်ငံတစ်ကာက ငွေကြေးတွေကို မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ပရောဂျက်ပေါင်းများစွာနဲ့ တင်တောင်းပြီး ဒီမိုကရေစီအတွက်ရလာတဲ့ ငွေကြေးတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖြုံးတည်းနေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုမောင်မောင်ကငွေရှာကောင်းခဲ့လို့ အမ်စီယူဘီမှာ အတွင်းရေးမှုး ဖြစ်သွားပြီးမှ ဦးစိန်ဝင်းတို့နဲ့ ပြဒါးတစ်လမ်း သံတစ်လမ်း ဖြစ်သွားကြတာပါ။ ကိုမောင်မောင်အတွင်းရေးမှုးလုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားအဖွဲ့ဟာလည်း အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးလှဦး ဥက္ကဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုပါ၊ တကယ်တော့ သူတို့အားလုံးဟာ အရင်တုန်းက အလွန်ချစ်ခင်ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးမဟာမိတ်တွေပါဘဲ၊ နိုင်ငံတကာက ဒီမိုကရေစီကို ထောက်ခံတယ်ဆိုပြီး မဖြစ်စလောက် ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် ဒေါ်လာနဲ့ယူရိုနောက်ကိုလိုက်ရင်း အရင်းအမြစ်နေရာချင်း တူနေလို့ ခွါပြဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမ်စီယူဘီရော အမ်စီဂျီယူဘီရော နိုင်ငံရေးအရအားနည်းချက်ရှိနေတာ အမှန်ပါဘဲ၊ လူကနည်းပြီး တပ်ပေါင်းစုတွေများလာတာရယ်၊ မျောက်သစ်ကိုင်းကူးသလို ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်၊ ပရောဂျက်ရအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေကို အားရှိလာအောင် ပေါင်းပြီးတပ်ပေါင်းစုထဲက တပ်ပေါင်းစုငယ်တွေပြန်ပေါ်လာ စသည်ဖြစ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်၊ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုဆိုသလို မိမိတို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိသလို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သူတွေဟာလည်း နိုင်ငံရေးအရ ပိုပြီးတာဝန်ရှိပါတယ်၊ ငွေရှာပေးနိူင်တယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးအရအားနည်းချက်ရှိနေသူကို အမ်စီယူဘီမှာ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး နေရာပေးတာတွေ၊ လူမှုရေးဖေါက်ပြန်မှုနှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကချင်လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုကြီးမှာ ဗဟိုကော်မီတီတစ်ယောက် အနေနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးတွေကို ပူပူနွေးနွေး တပ်ပေါင်းစုကလေးမှာ ဥက္ကဌအဖြစ်တင်မြှောက်ထားတာတွေဟာ အင်မတန်မှ အကျည်းတန်တဲ့ ငွေရှာ နေရာယူနိုင်ငံရေးဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာ သန့်သန့်စင်စင်ခေါင်းဆောင်တွေကို ရှာဖွေတင်မြှောက်ပေး ရန်လိုသလို သန့်သန့်စင်စင် ခေါင်းဆောင်တွေကိုရဘို့ရန် အလွန်ပင်ခက်ခဲပြီး အခုချိန်မှာဆိုရင် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ငွေရှာနေရာယူနိုင်ငံရေးကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးပါက အဲဒီခေါင်းဆောင်တွေဟာ ငွေရှာတာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီး ဘာမှမလုပ်နိူင်ဘဲ ငွေရှာရေးပေါ်လစီကို ဦးစားပေးမိမှာမို့ မှန်ကန်တဲ့တိုက်ပွဲဝင်လမ်းကြောင်းကို လျှောက်နိူင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ စေ့စပ်ရေးကိုအရေခြုံပြီး လူကြားကောင်းအောင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားတွေအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ တောင်းဆိုယုံနဲ့တော့ နိုင်ငံတကာကလည်းတာဝန်ကျေပေးတဲ့ နိုင်ငံရေးသနားကြေး၊ စာနာကြေးလေး လောက်တော့ ဆက်ရနေကြဦးမှာပါ၊ တော်လှန်ရေးဆိုတာလည်းဖြစ်မလာ လက်နက်တွေဗုံးတွေလည်း ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့ “ရရင်ရ မရင်ချ” ရမဲ့အချိန်အခါမှာ အမ်ဂျီအိုတွေက မဖြစ်စလောက်ပေးတဲ့ငွေကြေး တွေဟာ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်တော့ အဆိပ်အတောက်တွေပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာစားဖါးတွေနဲ့ အမ်ဂျီအိုစားဖါးတွေပေါင်းပြီး၊ အမေရိကားနဲ့ဥရောပမှာခြေရှုပ်နေကြပါတယ်၊ မဟာဗျူဟာဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တယ်ဆိုပြီး ကိုနိုင်အောင်ကနေ သူသြဇာညောင်းတဲ့သူတွေကို ဥရောပကို အပျော်ခရီးထွက်သလိုလက်ရွေးစင်ခေါ်ယူသွားပြီး ဆွေးနွေးပွဲ တွေကိုလုပ်ပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်က ခပ်ပျော့ပျော့လေးရယ်၊ ငွေတောင်းလို့ကောင်းရုံလေးပါဘဲ။ ဦးစိန်ဝင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရမျိုးက လွှဲမှားနေတဲ့ပေါ်လစီကို ကျင့်သုံးနေတယ်လို့ လူအများက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိအောင် ဘယ်လိုမှစွမ်းဆောင်နိူင်မှာမဟုတ်တဲ့ အသနားခံပေါ်လစီကို အမြဲတန်းကိုင်ဆွဲထားတဲ့ ဦးစိန်ဝင်း ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရမျိုးကို ဘယ်သူကမှ မထောက်ခံကြပါဘူး။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ဦးစိန်ဝင်းနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူအားလုံးကို ပြောချင်တာကတော့ ဒီထက်ရှုတ်ထွေးတဲ့ ငွေကြွေးအရှုတ်တော်ပုံတွေ၊ လိင်ကိစ္စအရှုတ်တော်ပုံတွေ အများကြီး မြန်မာအတိုက်အခံလောကမှာ ရှိပါသေးတယ်။ မြန်မာလူထုအနေနဲ့ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်း ဆိုတာတွေကို တစ်ခုမှ မယုံကြပါနဲ့၊ ပြည်တွင်းက အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေကိုလည်း သတိထားကြပါ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဆိုတဲ့လူတွေကတော့ အဆိုးဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေပေးရင် Myanmar Express မှ ထပ်ပြီး ဖွင့်ချပြပါအုံးမယ်။
အရေးကြီး သွေးနီး ဆိုတဲ့ စကား မြန်မာစာပေမှာ ရှိခဲ့ပေမယ့် မြန်မာအတိုက်အခံတွေအတွက်ကတော့ အရေးကြီးချိန်တိုရင် အားလုံးက ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြေးကြပါတယ်။ နော်ဝေနိုင်ငံ အခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့ အသံ - DVB သတင်းဌာနတွင် မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၃,၀၀၀ ခန့် တန်ဖိုးရှိသည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုံးသိန်း ငွေစာရင်းကွာဟာမှုကြောင့် ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးချမ်းနိုင် နှင့် လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်းတို့နှစ်ဦးကအုပ်ချုပ် ရေးရာထူးများမှာ ယာယီ နှုတ်ထွက်ထားပြီး အမှု မှန်ပေါ်ပေါက်ရန်အတွက် နော်ဝေရဲဌာနမှအမှုဖွင့် စစ်ဆေးနေကြောင်း DVB က ထုတ်လွှင့်သွားပါတယ်။ ငွေးကြေးအရှုတ်အထုတ်တွေနဲ့ ဖြုတ်ထုတ်ရှင်း လုပ်နေချိန်မှာပဲ VJ အဖွဲ့က DVB မှ ထပ်ပြီး ခွဲထွက်သွားပြန်ပါတယ်။ မြန်မာအတိုက်အခံ အင်အားစုတွေ အနေနဲ့ အခုလို မျိုး ငွေးကြေးအရှုတ်အထုတ် ပြဿနာတွေ အမြဲလိုလို ဖြစ်နေတတ်ပြီး ပြဿနာဖြစ်လာတိုင်းမှာ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြီး တစ်ခြားတစ်ယောက်ကို ချောက်တွန်းတက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မလေးရှား NLD-LA မှာ ဖြစ်တဲ့ ငွေးကြေးကိစ္စတုန်းကလည်းပဲ လက်တွဲဖော်အချင်းချင်း ချောက်တွန်းမှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု DVB ရဲ့ သိန်း သုံးထောင် ကျော် ကို လည်း ခိုးယူသူတွေက ရာထူးကြီးပိုင်းတွေ ဖြစ်ပြီး စွပ်စွဲခံရသူတွေက ချောက်တွန်းခံရသူတွေသာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အခြေအနေမကောင်းချိန်မှာ VJ အဖွဲ့ကတော့ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြီး ထွက်သွားပါပြီ။ VJ အဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကတော့
မြန်မာအတိုက်အခံများရဲ့ ဒေါ်လာခိုးယူမှု အရှုတ်တော်ပုံ
မြန်မာအတိုက်အခံများရဲ့ ဒေါ်လာခိုးယူမှု အရှုတ်တော်ပုံ¯
သီလဆိုသည်မှာ စည်းကမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။သီလဆိုသည်မှာ ကိုယ်အမူအရာ နှင့် နုတ်အမူအရာကို စောင့်ထိန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။သီလကောင်းသောလူသည်အပြစ်ကင်းပါသည်။ အပြစ်ကင်းလျှင် သုခ ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတွေရရှိသောကြောင့်၊မိမိကိုယ့်ကိုယ်မိမိ(confident)ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ မိမိဘ၀ကို စိတ်ချယုံ ကြည် သော ပုဂ္ဂိုလ် သည် သေလည်း သေရဲပါသည်။နေလည်းနေရဲပါသည်။ သီလကောင်းလျှင် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် အပြစ် တင် ခြင်း ၊ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် စွတ် စွဲခြင်း ၊ မိမိကို သူတစ်ပါးစွတ်စွဲခြင်း၊ ဘေးမှလည်းလွတ်မြှေက်သော ကြောင့် စိတ်က အမြဲတမ်း ကြည်လင် နေစေပါ သည်။စိတ်ကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရုပ်ပါကြည်လင် လာ စေပါသည်။ရုပ်ကို စိတ်ကအစဉ်သဖြင့် ပြောင်းလဲစေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် - လူတို.၏ ခန္ဒာကိုယ် တကိုယ်လုံးသည် သွေးများနှင့်လည်ပတ်နေ သော ကြောင့် စိတ်၏ ပြောင်းလဲမှု. မှ နှလုံးသွေးကလည်းပြောင်းလည်းပြီး မျက်နှာအနေ အထား လည်းပြောင်းလဲတတ် လေ သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်-နှလုံးသွေးသည် ဥာဏ်ဝင်သောအခါပတ္တမြားရောင်တောက်၏။သဒ္ဓါဝင်တဲ့အခါရွှေရောင်တောက်ပါ၏။ဒေါသ၀င်ရင်မဲတတ်၍ ရာဂ၀င်လျှင် နီတတ် ၏ ။ မောဟ၀င်တော့ နီကျဲကျဲ။ ၀ိတက် ၀င် တော့ဖြူကြဲကြဲ အရောင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို.ကြောင့် စိတ်တိုသော အချိန်တွင် မျက်နှာပေါ်တွင် မဲပုတ်နေတတ်သည်။ ထို.ကြောင့် ရုပ်ကို စိတ်က အစဉ် သဖြင့်ပြောင်းလဲစေသော သဘော ရှိ လေသည်။ထို.ကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် လည်းမစွတ်စွဲမိအောင်၊ သူတစ်ပါးတို. ကလည်း ကိုယ့်ကို အစွတ်စွဲ မခံ ကြ ရလေ အောင်၊ မိမိတို. ၏ကိုယ် ၊ နုတ်နှစ်ပါး ဖြစ်သော ကာယကံ၊၀စီကံ နှစ်ပါး ကို အပြစ်ကင်း အောင် သီလ နဲ့ထိန်းခြင်းဖြင့် စိတ်နှလုံးကြည်လင်သော်ကြောင့်၊နေသောလည်းကြည်လင် သေတော့လည်းကြည်လင်စေ၏ ။ထို့ကြောင့်အိုသည့်တိုင်အောင် ကောင်းသည်ဆိုတာသီလပါပဲ။အိုခြင်းတစ်ရားကို သီလနဲတန်ဆာဆင်ပါ။ ငါးပါးသီလ ဆိုသည်မှာ ဆောက်တည်ခြင်း (၅)ခုကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ပုံမှာယမဟံ ၀ဒါမိ တံ ၀ဒေထ။ အာမ ဘန္တေသရဏ ဂမနံ ပရိပုဏ်ဏံ ။ အာမ ဘန္တေနမော တဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသဗ္မုဒ္ဓဿ ( သုံးကြိမ်) ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊(ဒုတိယမ္ပိ၊ တတိယမ္ပိ) ၁။ ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။ ((သူ့အသက်လည်း မသတ်ဘဲ အမြဲရှောင်ကြဉ်မည်။))သတ်ဖို့သွေးဆူနေသူများလူသတ်ကောင် မိုးသီးအသက်မပြည့်ခင်ကတည်းက သတ်ချင်ဖြတ်ချင်စိတ်များ လွှမ်းမိုးနေသည့် မေကိုလတ်လူ တစ်ရာကျော် သတ်ခဲ့တယ်ဆိုသည့် သြော်ဇီရောက် မြန်မာအတိုက်အခံ ထူးထူးဟန်၂။ အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။ ((သူ့ဥစ္စာလည်း မခိုးဘဲ အမြဲရှောင်ကြဉ်မည်။)) ဒေါ်လာ သုံးသိန်းခိုးယူ မှု ဖြစ်ပွားနေသည့် DVB မှ သန်းဝင်းထွဋ်ဒေါ်လာ သုံးသိန်းခိုးယူမှု ဖြစ်ပွားနေသည့် DVB မှ မသီတာ၃။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။((သူ့အိမ်ယာ၊ သူများ သား မယား လည်း မပြစ်မှားဘဲ အမြဲရှောင်ကြဉ်မည်။)) လင်ရှိမယား အင်ကြင်းနိုင်ကို ပစ်မှားခဲ့သည့် စိုင်းသိန်းဝင်းလင်ရှိလျှက် ဖောက်ပြန်ခဲ့သူ RFA မှ အင်ကြာင်းနိုင်မိုးသွေးငယ်နှင့် ဖောက်ပြန်နေသည့် ငယ်နိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်သူ ဂျေဂျူဝိုင် တောင်အလွတ်မပေးသည့် RFA မှ မဆုမွန်၎။ မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။((လိမ်လည်၍လည်း မပြောဘဲ အမြဲရှောင်ကြဉ်မည်။))သူဘာသူနေတဲ့ မေဆွိ ကိုတောင် သေတယ်လို့ လိမ်တဲ့ ဧရာဝတီမှ အောင်ဇော်DVB မှ အံ့ဘုန်းမြတ်လိမ်နေစဉ်လူလိမ်ရဲရင့်ငယ်RFA မဆုမွန် လိမ်ပြန်ပြီ၅။ သုရာမေရယမဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။((သေရည်အရက်လည်း မသောက်ဘဲ အမြဲရှောင်ကြဉ်မည်။))သောက်စား ပျော်ပါးနေသည့် စလုံးမှ မြန်မာတစ်စုဒီမိုကရေစီအတွက် သောက်နေကြသည့် ဒေါက်တာနိုင်အောင်တို့ အဖွဲ့DVB အံ့ဘုန်းမြတ်တို့လည်း လူမှန်းမသိအောင် သောက်ဟု ဆိုနယူယောက်က အောင်ခန့်တို့လည်း သေရည်အရက် မကင်းနိုင်ပြန်သီလ ငါးပါးမှာ တစ်ပါးမှ မကင်နိုင်တဲ့ မြန်မာအတိုက်အခံများ ကို အတုယူမမှားကြလေနှင့်...။ ဘာသာရေးနဲ့ အကျင့်သီလ အလွန်အင်မတန် အားနည်းတဲ့ အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူများအားလုံး နာယူသင့်တဲ့ တရားတစ်ခုကတော့ ဘဝ ဆက်တိုင်းမှာ သီလ မလုံ၊ သမာဓိ မရှိတဲ့ အမှားသရုပ်ပြ မြန်မာအတိုက်အခံတွေလို လူတကာ ရွံရှာစက်စုတ် မုန်းတီးခံရပြီး လူမွှေးလူတောင်မပြောင် အရောင်မထွက် သူ မဖြစ်ရပါလို၏.....။Myanmar Express
ဒေါ်လာသူခိုးများစုဝေးရာ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် DVB
နော်ဝေနိုင်ငံအခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ DVB ဒေါ်လာ သုံးသိန်းကျော် ပျောက်ဆုံးမှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခိုးယူသူမှာ ၃ ဦး ဖြစ်ပြီး လောလောဆယ်တော့ ရုံးတင်ခံထားရပါတယ်။ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့ လက်ထောက် ညွန်ကြားရေးမှူး တို့လည်း ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံလိုက်ရပါတယ်။ခိုးယူသူ သုံးယောက်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်က ဖြစ်ပါတယ်။ မဲဆောက်ရုံးကနေ နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလို ရုံးချုပ်ကို တင်တဲ့ စာရင်းမှာ သုံးသိန်းကျော်ကွာဟနေရာက စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမှုဆောင်ညွန်ကြားရေးမှုးနှစ်ဦးမရှိချိန်မှာ ဦးဟန်ညောင်ရွှေက ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးရာထူးကို ခဏ ယူထားကြောင်း သိရပါတယ်။DVB အပါအဝင် ပြည်ပအခြေဆိုက် သတင်းဌာနတွေမှာ ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းတွေ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေ နဲ့ အစိုးရ အတိုက်အခံတွေက အများဆုံးနေရာယူထားကြတာဖြစ်ပြီး အခု ဒေါ်လာ သုံးသိန်း ပျော်ဆုံးမှုဟာ ဒီနှစ်မှ ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာသတင်းဌာနတွေဟာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေဆီက ဒေါ်လာ အလှူခံတောင်းစားနေကြသူများဖြစ်ပြီး အခုလို ဒေါ်လာ ခိုးမစား သင့်ကြောင်းကို မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက အခုလိုပြောပါတယ်.."ဒီ ပြည်ပအခြေဆိုက် သတင်းဌာနတွေဆိုတာ ဒီလိုပဲ နိုင်ငံခြားက ဒေါ်လာ တောင်းစားနေရတာလေ.. ခုတော့ တောင်းစားတဲ့ အဆင့်ကနေ ခိုးစားတဲ့ အဆင့်တောင် ရောက်ကုန်ပြီဆိုတော့ အရမ်းစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ.. သူတို့တွေက နိုင်ငံအတွက်လုပ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဒီမိုကရေစီ အတွက်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး.. ဒေါ်လာလိုချင်လို့ လုပ်တယ်ဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်သလိုပဲ.... ကိုယ့်ကို ထမင်းကျွေးတဲ့လက်ကို ပြန်ကိုက်တဲ့ ခွေးလိုပေါ့ဗျာ... နောက်ဆုံးတော့ သူတို့ကို ထမင်းကျွေးထားတဲ့ DVB လည်း သိက္ခာကျတယ် နောက်ဆို ဘယ်နိုင်ငံကမှ အလှူငွေထည့်မှာမဟုတ်တော့ဘူး... " လို့ပြောပါတယ်..ဒါ့အပြင် DVB အပါအဝင် ပြည်ပအခြေဆိုက် မီဒီယာများအနေနဲ့ သတင်းတွေထုတ်လွှင့်ရာမှာ လိမ်ညာမှုတွေလည်း ရှိပြီး ခု ခိုးယူမှုတွေပါ ဖြစ်နေတာဟာ သတင်းဌာနမှာ ရှိသူတွေရဲ့ သီလ သမာဓိ ဘယ်လောက်ချို့ယွင်းကြောင်း သက်သေဖြစ်တယ်လို့ သူက အခုလို ဆက်ပြောပါတယ်။"အရင်တုန်းကကတည်းက ပြည်ပမီဒီယာတွေရဲ့ ထုတ်လွှင့်မှုတွေက လိမ်ညာမှုတွေပါတယ် မုသာဝါဒါ ကို ကျူးလွန်းနေတယ်လို့ အားလုံးက သိနေကြတယ်ဗျ... အခုတော့ အဒိန္နာဒါနာ ကိုပါ ကျူးလွန်ပြန်တော့ ဘာ သီလ ဘာသမာဓိမှ မရှိတော့ဘူး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားလည်း ပျက်နေပြီဆိုတာ သက်သေပြလိုက်တာပါပဲဗျာ... " လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။ဒီခိုးမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအပေါ် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ အထင်အမြင်သေးမှုတွေ တိုးပွားလာနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်သူများလည်းရှိပါတယ်။ မဲဆောက်မှ DVB တာဝန်ခံ ဒေါ်လာ သူခိုး သုံးဦးကို ဒီလအတွင်း ရုံးတင်မှာ ဖြစ်ပြီး။ DVB ရဲ့ ဂရက်ကြောင့် တခြားသတင်းဌာနတွေက သတင်းထောက်တွေလည်း မျက်ခုံးလှုပ်နေရကြောင်း သိရပါတယ်။Myanmar Express
မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့် ပြည်သူများအား စစ်တပ် ကူညီ၊ ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခ သည်များက ရွှေ့ပြောင်းရေး အစီအစဉ် ငြင်းဆန်
ချက်ချင်းဝဋ်လည်သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ (Britain which ...
ဒေါင်းမလေး လှပရဲ့ ဒါပေမယ့်ကွယ်...... (How pretty y...
ဒေါ်စုမှ ညီညွတ်ကြဖို့ ပြောသော်လည်း စင်္ကာပူရောက်မြန်မ...
အတိုက်အခံ အင်အားစုများရဲ့ ငွေကြေးအရှုတ်တော်ပုံများက...
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမေရ်ိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပထမဆုံးသမ္မတ ဂျော့ရ်ှဝါရှင်တန်၏ အိမ်တော်ကို သွားရောက်လေ့လာ
[image: Photo: နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမေရ်ိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပထမဆုံးသမ္မတ ဂျော့ရ်ှဝါရှင်တန်၏ အိမ်တော်ကို သွားရောက်လေ့လာ =================================...
ဇေယျသုခ ကျောင်းတိုက်တွင် ဘာသာသာသနာအကျိုး သယ်ပိုးနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ဇေယျသုခ ကျောင်းတိုက်တွင် ဘာသာသာသနာအကျိုး သယ်ပိုးနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပနေစဉ်။ အမျိုးဘာသာ သာသနာအကျိုး ဆတက်တပိုး တိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ညှိန...
မောက်စံရှိ NLD ပါတီရုံးအား ဒုတိယအကြိမ် PNA ဝိုင်းထားပြီးနောက် NLD ပါတီဝင်များ နှုတ်ထွက်ကြမည်
From : ..The Myanma Age
မေလ ၁၈ရက်နေ့ နေ့လည် ၂နာရီခန့်တွင် ပအို့ဝ်အမျိုးသားတပ်မတော်(PNA)မှ လက်နက်ကိုင်ဦးရေ ၃၀ ခန့် သည် ဒုတိယ အကြိမ် အဖြစ် တောင်ကြီးမြို့နယ်...
Eurovision သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ ဆုအား ဒိန်းမတ် နိုင်ငံသူ ရရှိ
[image: Eurovision သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ ဆုအား ဒိန်းမတ် နိုင်ငံသူ ရရှိ] မယ်လ်မို မေ ၁၉
ယခုနှစ်၏ ဥရောပ Eurovision သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲ၌ ဒိန်းမတ် န...
၀ါကာအူဒင်မေးခွန်းကို သမ္မတက အဖက်မလုပ်( မဖြေ)
ဒီနေ့မှာ ကျင်းပတဲ့ ဘင်္ဂါလီ လော်ဘီ VOA (Burmese) က စီစဉ်တဲ့ တတ်သည့်ပညာရှင် (ရိုလိမ်ဆရာများ) နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ အထူးမေးခွန်းရခဲ့သူ ၄ ဦးရှိတဲ့ အထဲမှာ အထူးဧ...
ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်း ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာရန်နှင့် ကိုယ်ပိုင် စွမ်းရည်ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖော် ထုတ် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ကြရန် မှာကြား
နေပြည်တော် မေ ၁၉ ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းက လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထား ရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်မြတ်မြတ် အုန်းခင်သည...
၁၅၀၀ တန်ဖုန်းမှလွဲ၍ ကျန်ဖုန်းများ အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်
အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် မိုဘိုင်းဖုန်း သို့ တိုက်ရိုက် ငွေဖြည့်သွင်း နိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှု အား www.topup.com.mm သို့ ၀င်ရောက် အသုံးပြုကာ ငွေဖြည့် နိုင်ပြီြ...
လိင်တူချစ်သူ တို့၏ ညနေခင်း
စကပ်တိုတို အင်္ကျီအကျပ် ဖိနပ်ဒေါက်မြင့် ကိုယ်စီဖြင့် အုပ်စုလိုက် လမ်းလျှောက်ပုံက ခရေပွင့်များ လေလွင့် လာသည့်နှယ်။ပြင်ဆင်လိမ်းခြယ်ထား သည်မှာ မော်ဒယ်လ်ရှုံးေ...